Hevitra MPANOHARIANA | Mey 2008
Fanitsiana governemanta: Fetsy Ravalomanana
2008-05-02 @ 05:12 in Politika
Hita mihitsy ny fahaizan’ny filoha na izay manolotsaina azy amin’ny zavatra ataony ankehitriny. Efa malaza loatra amin’ny fampahalalam-baovao fa tsy hotazonina ho minisitra intsony ohatra ny Minisitry ny fampianarana Radavidson Andriamparany, ary izy irery ihany aloha amin’izao fotoana izao fa mbola mihantona ny amin’Atoa Ramiaramanana Patrick dia ny andro mialoha ny tsy ivoahan’ny gazety no hampitany vaovao amin’ny rehetra. Amin’izay fotoana izay dia tsy misy gazety milaza ny heviny fa fampitana amin’ny alalan’ny vaovao an-tsary amin’ny valo ora alina ihany no ahitan’ny rehetra azy. Rehefa tonga moa ny afaka ampitson’iny dia efa tsy mahataitra ny be sy ny maro intsony ny lazain’ny gazety. Tsikaritra izany toe-javatra izany raha namoaka ny lisitry ny loholona andro sabotsy izy ary dia mbola narahin’ny famoahana ny fanitsiana ny lisitry ny mpikambana amin’ny governemanta indray avy eo.
Tamin’ny 30 avrily 2008 lasa teo tokoa manko no namoahan’ny filoha indray ireo mpikambana ao amin’ny governemanta izay tsy nisy fanovana loatra ankoatra ny fanalana minisitra iray sy fanoloana minisitra roa lasa loholona (Ivan Randriasandratriniony sy Tsiandopy Jacky Mahafaly). Saingy anarana dimy vaovao indray no re nandritra izany fotoana izany ary ny iray moa tsy voaraiko afa-tsy ny Fanampin’anarana izay mbola mety ho diso ihany koa. Ho an’izay mbola tsy maharaka aloha dia aleo soratana ihany ireo vaovao ireo. Ireto avy izany:
Abdou Salame : Minisitry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy.
Pierrot Botozaza : Minisitry ny fitaterana
Stangeline Ralambomanana Randrianarisandy : Minisitry ny fampianarana
Yin Vah Zafilahy : Minisitra lefitra fampianarana ambony
Armand Panja ... : Minisitry ny fambolena
Mazava loatra fa somary nihena ny andraikitry ny minisitra lefitra teo aloha satria ny resaka fananantany sisa no tena iandraiketany.
Manaraka izany dia niresaka momba ny fihaonana tamin’ny FMF (Federasiona Malagasy ny baolina Fandaka) ihany koa ny filoha ka nanambarany fa tena tompon’andraikitra tamin’iny lalao niteraka korontana iny ny FMF na dia manilika azy ho amin’ny ekipa nanomana azy ihany aza (Ajesaia). Nolazainy ihany koa fa tsy fanao ny miverina amin’ny fanapahan-kevitra noraisina. Inona moa no azo ambara fa dia mihaino fotsiny izany.